Wasiirka Amniga Puntland oo ka hadlay dagaalka ka dhacay Saldhigga Boosaaso – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAWasiirka Amniga Puntland oo ka hadlay dagaalka ka dhacay Saldhigga Boosaaso
Wasiirka Amniga Puntland oo ka hadlay dagaalka ka dhacay Saldhigga Boosaaso
February 7, 2018 Cabdi nuur WARARKA MAANTA 0
Wasiirka Amniga maamulka Puntland, Axmed Cabdullaahi Yuusuf ayaa wuxuu faafaahin ka bixiyay Weerar ka dhacay saldhigga Booliska Bartamaha ee Boosaaso.
Wasiir Axmed ayaa sheegay in Weerarkaas uu dhankooda Khasaare kasoo gaaray isla markaana ay ku dhaawacmeen Askar ka tirsan Ciidamada maamulkaas, wuxuuna hadalkiisa raaciyay in Taliye ku xigeenka Saldhigga Bartamaha ee Boosaaso uu dhaawac kasoo gaaray weerarka.
Wuxuu Beeniyay Wasiirku in weerarkaas ay ciidamadooda wax Khasaare ah oo dhaawac ka baxsan kasoo gaareen weerarka, isagoo Ammaan u jeediyay ciidamadii Saldhigga joogay xilliga uu weerarku dhacay.
Saldhigga Bartamaha ayaa mar qura caawa Fiidkii laga Maqlay Bambaanooyin, waxaana xigay rasaas ay is dhaafsanayeen ciidamada saldhigga joogay iyo kooxda weerarka qaadday, sida dadka degmadu ay sheegayaan.
Wasiirka Amiga ee Puntland wuxuu sheegay in aysan taasi waxba u dhimi doonin Hannaanka Amniga iyo Howlgallada Booliska ee Boosaaso.
Warbaahinta Imaaraadka Oo Faasay Kulan Dhex Maray La-Taliyaha Madaxweynaha Somalia & Sairka U
44,937 total views, 1,887 views today
44,937 total views, 1,887 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
45,008 total views, 1,886 views today
45,008 total views, 1,886 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
45,021 total views, 1,885 views today
45,021 total views, 1,885 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
45,043 total views, 1,885 views today
45,043 total views, 1,885 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
45,078 total views, 1,887 views today
45,078 total views, 1,887 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]